WAXAA HARGEYSA KA DEGTAY DIYAARADII MUQDISHO - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka WAXAA HARGEYSA KA DEGTAY DIYAARADII MUQDISHO
WAXAA HARGEYSA KA DEGTAY DIYAARADII MUQDISHO
Muqdisho (Walwaal Online), inkasta oo xukuumadda Muuse Biixi sheegtay in ay handaraabtay gegida dayuuraduhu ka haadaan kuna degaan ee magaalada Hargaysa ku yaal loona aqoon ogyahay Cigaal International Airport, misna waxaa maanta ka degtay diyaarad Muqdisho ka haaddey.
Waatii aan isla ogayn in maamulka Hargaysi sheegay in uu joojiyey duullimaadyada qaarkood, oo ay ku jirtey magaalo madaxda Somaliya Muqdisho, Hase yeeshee, sida lasoo tebinayo waxaa jirey duullimaad khamiistii ka degay isla garoonkaa, iyadoon wax caqabad ahi ka hor imaan. Qaar ka mid ah dayuuradaha ay maamulaan shirkadaha Soomaalidu ayaa sheegay in ay tageen tegina doonaan magaalooyinka waddanka.
Safarada diyaaradaha ee tegaya kana imaanaya Hargaysa ayaa ina wax kama jire ka dhigay kala xidhkii la doonayey in waddanka lagu kala qoqobo. Waxaa na muuqata in uu dhaqan galay qorshihii dowlada ee ahaa in aan lagusoo rogin waddanka gudihiisa xayiraada debediisa lagusoo rogey.
Dhanka kalena Raisal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in 2 maalmood dib loo furay handaraabkii awel lagu jiqsiiyey garoomada diyaaradaha ee waddanka, ka dib markii la og’aadey in Soomaali badani ku xayirantahay garoomada diyaaradaha waddamada qaarkood. Maxaa jira soomaalida oo aan baddanaa wararka caalamka dhegaysan ee iska safra sidii ay joogaan bannaanadii Soomaaliya ee ay xoolaha ku raacan jireen awgeed.
Previous articleXEERARKA QURUXDA BADAN EE XISAABTA
Next articleMASAAJIDDA & CORONAVIRUS (COVID-19)